चितवन, मङ्सिर १० गते । कोरोनाबाट पूर्णरूपमा प्रभावित बनेको यहाँको पर्यटन व्यवसायलाई नेकपा (एमाले)को १०औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनले चलायमान बनाएको छ । यससँगै आउँदा दिनमा यहाँको पर्यटन व्यवसायका लागि महाधिवेशन फलदायी हुने देखिएको छ ।
एमालेको १०औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन आजदेखि तीन दिनसम्म सञ्चालन हुनेछ । कोभिडका कारण पूर्णरूपमा प्रभावित बनेका होटलका सबै कोठा बुकिङ भएका छन् । न्यौपानेले महाधिवेशनका कारण सौराहामा मात्र रु. १० करोडभन्दा बढीको कारोबार हुने अनुमान गरिएको बताउनुभयो । उहाँको भनाइमा भरतपुरमा रु. पाँच करोडभन्दा बढीको कारोबार हुनेछ । यसबाट समग्र चितवनको अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्ने न्याैपानेको भनाइ छ ।